UTimati unentombi entsha. Timati: iindaba zakutshanje
Abafaki baseTimati baxubusha ngeendaba zakutsha malunga nobomi bomdakali: ulwazi luye lwabonakala ukuba umculi unentombi entsha. UMargarita Starostina oneminyaka engama-22 - umzekelo ovela kwi-Togliatti.
Nangona i-Timati i-blogger ekhutheleyo, ehlala ebeka iphepha lakhe kwi-Instagram yezithombe ezintsha, akayikukhawuleza ukuxelela ababhalisile bakhe ngobomi bakhe. Umculi uyavuya ukufumana iifoto zeemoto ezibiza, amawashi, iindawo ezihle, iividiyo kunye neefoto ezivela kwiikonkethi, kunye nemifanekiso yentombi yakhe encinci uAlice. Kodwa phakathi kweefoto ezininzi akunakwenzeka ukufumana loo ndawo apho iTimati ibonakaliswa kwinkampani yomhlobo wakhe. Ngenxa yaloo mvaleli wefihlakeleyo, abalandeli bakhe bazama ukufunda nantoni na ngobomi bakhe, bafunda ulwazi kwiWebhu Yehlabathi. Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule, umfanekiso weTimati noMargarita Starostina ubonakala kwi-intanethi.
Kulo mfanekiso, intombazana yashiya impendulo ekhangayo:
Siyabonga ngokubonga ngokuhlwa ngokumangalisayo kunye nenkxaso kwilizwe langaphandle
Njengoko sikwazi ukufumanisa, umzekelo kunye nomculi othandwayo odibeneyo eMilan, apho ikhonkethi yomqambisi yenzeka khona. Iifoto zomculi zichaze ukufana okuphawulekayo phakathi kukaMargarita kunye nentombi yakhe yangaphambili uAlena Shishkova - imilomo efana neyoyiyo, inqwelwe eluncileyo, inwele ecacileyo imhlophe ...
Ngendlela, uTimoti naye wafihla ngokucokisekileyo ubuhlobo bakhe no-Alena Shishkova, kwada kwaziwa ukuba imodeli yazala intombi yakhe uAlice.
UAlexandro Oleshko akacebisi ukuba adle izitya ze-Crab
UKsenia Sobchak wuleza ukususa isithombe sezingane kwi-Instagram
I-Recipe ye-sauce emnandi neyomuncu
Isinkwa saseDenmark ngebheriya
Inka yezinyosi kunye namazambane
Intetho yokuthetha ngentetho yomntwana
Isiganeko sonyaka omtsha kubantwana: imeko yenkcazo yoNyaka omtsha 2016